အထည်အလိပ်ပျော့ပြောင်း မှအကောင်းဆုံး အထည်အလိပ်ပျော့ပြောင်း မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် အထည်အလိပ်ပျော့ပြောင်းစက်ရုံ, အလုပ်ရုံ, တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ဒါဟာသူကြွယ်အတွေ့အကြုံ, စိတ်အားထက်သန်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်လူငယ်များ၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကောင်လေးကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ R & D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံအနှစ်နှင့်အတူကျနော်တို့စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မား fine-ထုတ်ကုန်တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရောင်းဖို့ထက်သာလွန်ကိရိယာများ, အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖောက်သည်တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့။ သူတို့ရဲ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ကိုဖွံ့ဖြိုးရန်သူတို့ကိုကူညီပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက် "နှစ်ခုစလုံးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပေါ်အနိုင်ရမှ" ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံ - CL-500
စူပါ elastic ပျော့ပြောင်း
ဒီအေးဂျင့်အမျှင်ပျော့ပျောင်းစေရန်အသုံးပြုသည်.စျေးကွက်အပေါ်ပျော့ပြောင်း၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကြောင့်,ဒါမှမဟုတ်ပျော့ပျောင်းမှုကမလုံလောက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေ.CL-ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော 500 သည်အထူးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးအထက်ပါအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်-ဖော်ပြခဲ့တဲ့ချို့ယွင်းချက်.၎င်း၏ function ကိုဖိုင်ဘာ elastic စေရန်ဖြစ်ပါသည်,ဆန့်နှင့်အထူ,ထိမိသောအခါအသားအရေအားနူးညံ့ချောမွေ့စေခြင်း.အထူးသဖြင့်အများအပြားရေချိုးပြီးနောက်,၎င်း၏ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်လျှော်ခြင်းဖြင့်လျှော့ချမပေးပါ.ဒီအထူးစွမ်းဆောင်ရည်သည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးပျော့ပြောင်းသူဖြစ်သည်.ဒီအေးဂျင့် Tedlon အတွက်သင့်လျော်သည်,နိုင်လွန်,တီ/ဂ,တီ/R ကို,ဝါဂွမ်း,ပိတ်ချော,သိုးမွေး,acrylic ဖိုင်ဘာနှင့်အခြားပြားချပ်ချပ်ယက်နှင့်ဇာထိုးထည်.၎င်းသည် OP ဖိုင်ဘာပြုပြင်ခြင်းအတွက်ထူးခြားသောပျော့ပြောင်းမှုလက္ခဏာများရှိသည်.
ယေဘုယျသောက်သုံးသော0ဖြစ်ပါတယ်.5~3% (0WS)impregnation သည်.Wring(70%)->180 မှာခြောက်သွေ့̊ဂ&ကြိမ်;၃၀ စက္ကန့်.
ဤအေးဂျင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော Epoxy Silicone နှင့်ပေါင်းစပ်ပါက,အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းပါလိမ့်မည်.လက်လှမ်းမှီ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/textile-softener.html
အကောင်းဆုံး အထည်အလိပ်ပျော့ပြောင်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် အထည်အလိပ်ပျော့ပြောင်း ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်